Toriteny 22 Septambra 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny 22 Septambra 2013
Salamo 59 : 9-17 / Jaona 6 : 66-71 / Asan’ny Apostoly 3 : 7-13
Nandritra ity volana ity dia saika voalaza avokoa ny mahakasika izany hoe fiarovan’Andriamanitra ny mino. Mbola ao anatiny isika anio, fa ho singanintsika manokana kosa amin’ity androany ity ny amin’ny fiarovana amin’ny fahavalo goavana indrindra mamely sy mahavoa ny olombelona indrindra fa ny Kristiana, tsy inona izany fa ny fakam-panahy.
Inona moa no atao hoe fakam-panahy ?
Ny fakam-panahy dia hery avy ao anaty fa tsy avy any ivelany, izany no ilazana fa tena goavana io fahavalo io satria ny tenanao ihany no iadiavanao raha te ho tafavoaka ho mpandresy. Eto amin’ny Apokalipsy 3 : 10 ny resaka dia ampitain’i Jesoa Kristy indrindra ho an’ny olona izay efa nandray azy teo amin’ny fiainany.
Tiana ny manamarika fa ny fakam-panahy dia tsy mba avy amin’Andriamanitra fa isika olombelona ihany no mamorona azy. Ilay hery ao anaty na filàna ao anatin’ny tenantsika no miteraka izany ; ary rehefa be ny filàna ka tsy mahono-tena ilay olona dia lasa manota, ny fikolokoana io ota vokatry ny filàna tsy voafehy io no lasa mahalavo ka antsoina hoe lavon’ny fakam-panahy cf Jak 1 : 13-14. Tsy mifidy sokajin’olona ny fakam-panahy fa maro dia maro ; indrindra izay mahakasika ity nofontsika olombelona ity, eo ny vola, ny fijangajanagana, ny tsy fahamarinana, ny fisehoana ivelany toy ny sakafo, fitafiana, voninahitra, ny fiheveran-tena ho zavatra sns…….
Fantar’ilay ratsy avy hatrany ny momba ny nofontsika, ka toy izay nahazo an’I Jesoa raha vao hanomboka ny asany dia nalain’ny devoly fanahy tamin’ny fomba maro samihafa .
Ahoana ary no hiarovana amin’ny fakam-panahy ?
Ny fiarovana tsara indrindra dia ny ao anatinao I Jao 4 : 4 , milaza fa lehibe izay ao anatintsika noho izay eo amin’izao tontolo izao. Mila andosirana ny fakam-panahy satria sarotra amin’ny olona ny hanohitra rehefa tafalatsaka ao. Ny bokin’ny Kor 10 : 13 dia milaza fa asian’Andriamanaitra lalana mba ahazakantsika izany.
Fanampin’izany rehetra izany ; dia hentitra Andriamanitra mampianatra antsika fa ; ny olona rehetra izay manaiky an’I Jesoa amin’ny vava, ka mandray Azy ao am-pony dia tsy maintsy miaina sy mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra. Resy lava ny Kristiana milaza ho mivavaka nefa tsy mivelona amin’ny Tenin’Andriamanitra.
Fehiny, mivavaha isan’andro dia hahery ianao, mamakia Baiboly dia ho mpandresy ianao.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra. Amen!
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 24 septembre 2013